Bislr: Suuqgeyn Sirdoon OS | Martech Zone
Bislr: Suuqgeynta Sirdoonka OS
Jimcaha, Sebtember 13, 2013 Douglas Karr
Bislr ayaa la bilaabay codsigooda cusub, Autopilot, kaas oo isku daraya SaaS jiidaad iyo hoos u dhigista nidaamka otomatiga suuq geynta oo leh astaamaha badankood ee istiraatiijiyad otomatig ah suuq geyn adag. Waa nidaam la awoodi karo oo u muuqda inuu ka culus yahay qaar ka mid ah culaysyada culus ee warshadaha oo leh is-dhexgal nadiifin badan iyo is-dhexgal iyo astaamo aad u adag. Waxaa ka mid ah otomaatiga suuq-geynta, is-dhexgalka CRM, suuqgeynta iimaylka, bogagga degitaanka, baloog garaynta, baaritaanka A / B, maareynta maadooyinka iyo natiijooyinka waqtiga dhabta ah iyo falanqaynta.
Faahfaahin qaar ka mid ah qaababka muhiimka ah ee Bislr:
Jiilka Hogaaminta Bulshada - Hel quudin-waqtiga-dhabta ah oo kuu sheegaya sida ay rajooyinku uga hawlgalayaan bartaada iyo sidoo kale waxa ay hadda ku daabaceen Twitter iyo LinkedIn. Ku xidhnow macluumaadkan nidaamka aad jeceshahay CRM (Salesforce, NetSuite). Hel sirdoonka aad u baahan tahay si aad u dardar geliso dakhliga.
Bogagga soo dhicidda - Looma baahna IT ama cod lambarro leh naqshad naqshadeysan oo lagu dhisay. Tijaabi cinwaannada iyo muuqaalada kala duwan oo soo hel waxa shaqeynaya. Iyadoo la adeegsanayo Bislr, imtixaanka A / B maahan ikhtiyaar qaali ah - wuxuu ku yimaadaa heer. Natiijooyinka kala soco olole ama bogga degitaan.
Ololayaasha Webinar - Ku-dhex-galka GoToMeeting ee la tartamaya xalalka otomaatiga suuq-geynta suuq-geynta ee sarreeya $ 150k iyo wixii ka dambeeya. Ku badin isdiiwaangalinta bogga calaamadeynta webinar calaamadeysan ee ku fadhiya bartaada, maahan kooda.
Ololaha kobcinta hoggaaminta - Qoritaanka hoggaamintaada koowaad ee kobcinta ololaha jiid-iyo-dhibic fudud. Iyada oo leh qalab casri ah oo hubinaya in leedhka aan gadaal looga harin.
Goobta Ololaha - Qalabka jiidka-iyo-hoos u dhaca ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto barta aad u baahan tahay adigoon ku lug lahayn IT-ga. Goobta ololaha ee aad abuurtana waxay ku timaaddaa mid dhammaystiran oo leh naqshad jawaab celin ah, taas oo ka dhigaysa mid ay ku heli karaan rajooyinkaaga iyo macaamiishaada taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada.
Wicitaano firfircoon oo ficil ah - Dhis saamayn sare, wicitaano waxqabad oo caan ah. Mid dhig dhammaadka qoraal kasta oo baloog ah. U rogo rajada hogaaminta Bislr Suuq Sayniska OS, waqtiga dhabta ah.
Maxaad ku maqli weyday barnaamijka Apple Apple: iBeacons